Iwo 4 Akanaka Mapeji Ekutsvaga Jobho uye Kubudirira | ECommerce nhau
Encarni Arcoya | | Zvechokwadi uye nhau
Basa ndechimwe chinhu icho, kana iwe uchinge wasvika kune rimwe zera, chinokushungurudza iwe. Uye zvakawanda. Naizvozvo, kutsvaga basa kunova odyssey, kunyanya uchifunga nezvenguva dzenjodzi dzakamboitika uye dzakaita kuti vazhinji vanyatsoita mabasa akasiyana siyana, vachikwanisa kusarudza mabasa akasiyana. Iwo matekinoroji matsva akawanawo mabhenefiti uye ndezvekuti basa harichazongotsvagwa munzvimbo yaunogara, asi pane kudaro Mapeji emabasa kuti uwane iyo yakanaka chinzvimbo.
Kana iwe uri pakati pekutsvaga basa uye iwe usisazive kwekutarisa, apa isu tiri kuzokupa iwe akati wandei mapeji ekutsvaga basa uko kune yakanaka kwazvo mhedzisiro iri kuwanikwa. Nekuyedza iwe haurasikirwe nechinhu, uye neimwe nzira nenzira iyoyo iwe unoshandisa iyo yemahara nguva iwe yauinayo mukuwana yakawanda emabasa anopiwa ayo angave anonakidza kwauri.
1 Chii chekuchengetedza mupfungwa usati watsvaga basa pamapeji ebasa
2 Mapeji emabasa ekutsvaga basa
Chii chekuchengetedza mupfungwa usati watsvaga basa pamapeji ebasa
Kana iwe uchitsvaga basa, chimwe chishandiso chauinacho nguva dzese ndechekuti, pasina kupokana, yako tangazve. Mariri iwe unogona kuona pfupiso yehupenyu hwako hwekushanda, neirovedzo uye ruzivo rwauinarwo. Iri igwaro rinovhura musuwo kumakambani. Kana iwe uchikwanisa kumuita anokwezva zvakakwana kuti ashevedzwe, watove nemari yakawanda.
Naizvozvo, pteerera kune dhizaini yekutangazve Zvakare nedhata rese raunopa, rinoenderana nebasa raunoshuvira, zvinosungirwa.
Mumapeji ebasa iwe uchafanirwa kuatumira online, izvo zvinoita kuti tikurudzire kuti uve nazvo pakombuta yako, kana pane yako nhare, mune PDF fomati. Nei uri muPDF? Zvakanaka, nekuti iri fomati iyo inoipa iyo inoyevedza uye yekudhinda-kunge chitarisiko. Kana iwe ukaitumira iyo doc, chinhu chete chauchazoita ndechekuti ivo vanofanirwa kuvhura asi ivo havazozviona. Uye zvatinoda ndizvozvo.
Isu tinokurudzirawo kuti uchengete liwo mazita ezvidzidzo zvese uye kudzidziswa iwe zvaunowana kwauri. Mumapeji mazhinji emabasa vanokutendera kuti ugadzire chimiro uye nekuzadza zvirinani, zvirinani pfungwa yauchapa. Icho chikonzero nei tichikuudza iwe pamusoro pemazita acho ndechekuti iwe unogona kuzviisa zvese, pamwe nehuwandu hwemaawa, dzidziso yawakadzidza, mhedzisiro, nezvimwe. Ndokunge, usamire pakuisa musoro wedzidzo uye gore Inotsvaga kupa rumwe ruzivo.
Iwe unofanirwa kuita zvakafanana neruzivo, uchitaurirana basa rega rega nezvakanaka zvawakaita mariri, izvo zvawakadzidza uye nemabasa awakaita.
Mapeji emabasa ekutsvaga basa
Izvozvi zvawave nezvose zvakagadzirira, inguva yekukurudzira akateedzana emapeji ayo asingazove ehusiku, asi achakubatsira iwe kuwana kupihwa basa. Ehezve, sezvazvinoitika kwese kwese, iwe unofanirwa kuziva kusefa pakati peizvo zviripo uye izvo zvisiri, kuti usatambise nguva neaya echipiri.
Kana kupihwa kuchikufadza, edza nyora tsamba yekuvhavha kune iro basa chairo nekukurumidza sezvazvinogona. Saka ivo vanozoona kuti iwe unofarira zvechokwadi. Kana ukakurumidza kupindura kupihwa kupi, iwo mikana yakawanda iwe yauchazove nayo nekuti uyo anotora anozoona yako tangazve nekukurumidza uye iwe unogona kusarudzirwa kubvunzurudzwa.
Izvo zvakati, iwo mapeji atinokurudzira ndeaya:
Linkedln inzvimbo yekudyidzana, asi inosiyana nedzimwe pakuti inyanzvi. Zvinorevei? Zvakanaka, isu takatanga nekuti chimiro chauinacho chakafanana nekutangazve (saka izvo zvatakakuudza tisati tave nedata rese riripo).
Zvakare, izvo zvinongedzo zvekuiswa pazviri hazvisi zvemunhu, asi zvinehunyanzvi.
Ane a chikamu chakakosha kutsvaga basa, neinjini yekutsvaga iyo inokutendera iwe kuti uwane kwakasiyana kupihwa zvinoenderana nezvauri kutsvaga. Mazhinji acho akagadzirwa pasocial network pachayo, nekudaro nekudzvanya bhatani rekukumbira iwe unogona kunama kosi uye kuisa nhamba yako yefoni kuitira kuti vakufonere.
Sei tichiikurudzira? Nekuti kwete chete iwe une iyo sarudzo; Zvakare, kuburikidza nehama, unogona kuvabvunza kuti vagovane zvinyorwa zvako uye, neizvi, uwane vanhu vazhinji kukuziva iwe. Nenzira iyoyo iwe unozogona kuita kuti yako mbiri ifambe uye usvike kune chaicho vanhu.
Iyi portal yebasa ndeimwe yeinonyanya kuzivikanwa, uye chokwadi ndechekuti isu takaiyedza, saka tinoziva zvishoma nezve zvatichakurudzira iwe
Sezvakaita LinkedIn, unofanirwa tora nguva yekupedzisa zvizere chimiro chako uye, kana wapedza, unogona kusaina izvo zvaunopa zvaunoona.
Vazhinji vavo vanokukumbira tsamba dzekuvhara kana kupasa yakateedzana mibvunzo inoshandisa mafirita, asi iwe unogona kusaina pasina dambudziko. Zvino, zvinoshanda nemazvo here? Hongu uye kwete. Pakutanga, zvaive zvakajairika kuti, kana iwe ukapasa iyo firita, unozodaidzirwa kubvunzurudzo, asi kwete mumabasa ese.
Zvakajairika kuti iwe unyorese mazhinji acho uye haabudirire, asi chinhu chakanaka ndechekuti chimiro chako chinoitawo chinokwezva, nekuti vashandirwi pachavo vanogona kutsvaga uye kuti iwe uoneke mavari, nenzira yekuti hakusi kungo tsvaga kwekushingaira, asiwo kungoita.
Iyo ndeimwe remapeji ebasa kwaunowana mamwe mabasa anopa. Chaizvoizvo, hadzisi dzese dzakapihwa dzinoiswa pane iyo portal, asi inoshanda seinjini yemetasearch, ndiko kuti, izvo list basa rinopa zvese zvavo uye kubva kune mamwe mapeji Izvo zvinokuisira nguva, nekuti iwe uchaona zvimwe zvinopihwa kupfuura mamwe mawebhusaiti.
Iwe zvakare une nzvimbo yekukwirisa yako tangazve, chimwe chinhu chakakosha kwazvo, uye nekudaro uve nechokwadi chekuti, kana vakatsvaga iwe, vane ruzivo rwese rwavanoda kuvaratidza kuti ndiwe unokodzera kukwikwidza.
Izvi zvinobva pamapeji ebasa kwaunogona tsvaga zvinopihwa zvepasi rese. Muchokwadi, kune zvakawanda pano kubva kunze kweSpain kupfuura kubva kuSpain. Asi iwo mukana kana iwe uchida kuwana basa kune imwe nyika.
Ehezve, tinokurudzira kuti, kana iwe ukaisa resume yako, kana kuitumira, iwe unozviita muChirungu (uye iwe unotoziva kuti kune template yepasi rese yaunofanirwa kutevedzera nekuti yakabatana).
Kune mamwe akawanda mapeji emabasa, iwe unogona here kutitaurira chero akamboshandira iwe?
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Zvechokwadi uye nhau » Iwo mana akanakisa mapeji ekutsvaga basa